आईपीएल : पञ्जावसँग चेन्नई चार रनले पराजित
काठमाडौं, ३ वैशाख– इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा किङ्स इलेवन पञ्चाव विजयी भएको छ । पञ्जावले चेन्नई सुपर किङ्सलाई ४ रनले हराएको हो ।
खेलमा १ सय ९८ रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नईलाई १ सय ९३ रनमा समेट्दै पञ्जाव विजयी भयो । मोहालीमा भएको खेलमा चेन्नईका कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले नटआउट ७९ र अम्बाती रायडुले ४९ रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन सकेनन् ।
४४ बलमा ७९ रन बनाउने क्रममा धोनीले ६ चौका र ५ छक्का प्रहार गरेका थिए । पहिले ब्याटिङ गरेको पञ्जावले क्रिस गेलको ६३ रनको मद्दतमा १ सय ९७ रन बनाएको थियो । गेलले ३३ बलमा ७ चौका र ४ छक्कासहित ६३ रन बनाए । यस्तै, लोकेश राहुलले ३७ र मयांक अग्रवालले ३० रन बनाएका थिए ।
तीनमध्ये २ खेल जितेको पञ्जाव अंक तालिकाको दोश्रो स्थानमा उक्लिएको छ । तीनमध्ये २ खेल नै जिते पनि रन औसतका आधारमा चेन्नई तेश्रो स्थानमा छ ।
आईपीएल : कोहलीको बैंगलोरमाथि धोनीको चेन्नईको सहज जित
आईपीएल : कोहली भर्सेस् धोनी, कसले मार्ला बाजी ?
आईपीएल : आज दिल्ली र मुम्बई भिड्दै, सन्दीप पर्लान् प्लेइङ-११ मा ?
नेपाल एएफसी यू–२३ च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो
भैरहवास्थित सिद्धार्थ रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्ने मन्त्रीको उद्घोष
आजदेखि आईपीएल शुरु, उद्घाटन खेलमा विराट र धोनीको टिम भिड्दै